Kılıçdaroğlu oo Kahadlay Xiritaanka Channel Istanbul | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulKılıçdaroğlu ayaa kahadlay Aqoon-isweydaarsiga Channel Istanbul
kilicdaroglundan erdogana kanaal istanbul cagrisi
Hogaamiyaha CHP Kemal Kılıçdaroğlu ayaa ka hadlay madal laga qabtay Channel Istanbul Workshop İ oo ay soo qaban qaabisay IMM. Dik Waxaan ku gaarnay heer sidan oo kale ah inay kor u qaadaan cuntada la siiyo ardayda jaamacadaha. July 15 shahiiday ayaa isha ku haya lacagta qaraabada iyo halyeeyada. K Channellıçdaroğlu ayaa yidhi, 'Channel wuu samayn doonaa Istanbul, "Istanbul waxaa soo food saaray halis dhulgariir. Haddii aan wax ka qaban doono dhibaatooyinka dalkan, dhibaatooyinka magaaladan, dhibaatooyinka magaaladan qadiimiga ah, markaa dadka ayaan marka hore caawin doonaa. Wuxuu halis ugu jiraa dhulgariir. Aynu sameyno isbadal magaalo. Duqa Magaalada oo Diyaar u ah. Kooxahiisa, cadadihiisa waa diyaar. Degmooyinka degmadu sidoo kale waa diyaar. Ma jiro xisbi xisbi ixtiraamaya. Taasi waa muuqaalka duqa magaaladeena. Marka maxaa diidaya inaan dhibaatadan xallinno. Maxaan mudnaanta koowaad siin weyney nolosha aadanaha? Kama dadaalno mustaqbalka carruurteenna. Maxaynu uga tagnaa iyaga oo keliya halista dhulgariirrada ”.
Hogaamiyaha xisbiga CHP Kemal Kılıçdaroğlu, Istanbul Metropolitan Municipal (IMM) oo soo qaban qaabisay "Channel Istanbul Workshop" ayaa hadlay. "Waxaan ka hadlo dhacdo in dhibaato weyn u Turkey. Waxaan ka wada hadlaynaa ku-qasbidda qofka. Kılı Kılıçdaroğlu wuxuu yiri:
Uz Waxaan ka wada hadlaynaa dhacdo sababi doonta dhibaatooyin waaweyn. Maxaynu ugu murannaa? Sababahee ayaan ka wada hadlaynaa? Ku soo rogidda qofka… Shaqsiyaadka, qoysaska, bulshada waxay leeyihiin mudnaano. Gobolku wuxuu leeyahay mudnaano. Kuwaani waxay la xidhiidhaan qorshayaasha. Yaa sameeya qorshaha? Wuxuu sameeyaa saynisyahano ixtiraam leh, aqoonyahanno, injineerro, naqshadeeyeyaal, dhaqaaleyahannada bulshada. Si kale haddii loo dhigo, dadka mudnaanta leh ayaa go'aamiya ahmiyadaha bulshada. Ayaa dejiya muhiimadaha mashruucan? Ma yihiin naqshadeeyeyaal, injineerro, aqoonyahanno, aqoonyahanno, khubaro ku xeel dheer arrimaha dibedda? No. Waa qof. 'Tani waa ahmiyadayda, waan sameyn doonaa' ayuu yiri. Waxa kale oo aanu nidhi; Waan ka xumahay, sayid, sidaa ma yeeli kartid. Kuma siin doonno lacag qalin ah haddii gaashaanka lagu sameeyo tan hoos yimaada xukunka Isbahaysiga Qaranka. Cidna ma awoodo.
“BULSHADA waxay leedahay mudnaanta koowaad”
Qoysasku waxay leeyihiin mudnaano. Bulsho ayaa leh mudnaansheeda. Gobolku wuxuu leeyahay mudnaano. Kuwaani waxay ku dhacaan qorshaynta. Ayaa qorsheeya, dadka bulshada, injineerrada, dhaqaaleyahannada, dadka isku mudnaanta leh ayaa go'aaminaya ahmiyadaha bulshada. Ayaa dejiya muhiimadaha mashruucan? Maya, anigu waxaan ahay kan odhanayaa waxan sameeyaa Ekrem Bey, khudbadiisa, ‘qalliinkan waa hubaal waa la sameyn doonaa’ ayuu yiri. Erdogan wuxuu la baxay fahanka noocaas ah. Ninkii dhahaa 'qalitaankan waa la sameyn doonaa' waa inuu marka hore dhakhtar noqdo. Isagu maahan dhakhtar. Taasi waa dhibaatadayada. Waxaan dhihi lahaa hadii khabiirku yahay; 'Wuu ogyahay tan'. Ma yaqaan shaqada, waana wax caadi ah isagu ma yaqaan. Isagu ma uusan tababaran. Qeexitaanka horumarka qarniga 21aad sidoo kale wuu isbedelay. Dal ma horumar baa mise waa mid horumarsan: Faahfaahin yar ayaa gaadhay qaybta shaqaalaha? Ma tihid waddan horumaray haddaanad u tagin qaybinta shaqaalaha tafaasiil yar. Dal lagu qeexay caqli gal waxkasta oo aan ogahay, horumarka ayaa laga hadlaa, ee maaha horumar. Muxuu yahay mudnaanta mashruucan marka magaaladan ay dhibaato badan ku haysato waddankan? Ijaarasho, himilo lacag, qof ha siin lacag
BB IOM TEAM WAA AKHRIS “
Anigoo ah asxaabteyda qaaliga ah, waxaan gaarnay heer sidaan ay kor ugu qaadaan cuntada la siiyo ardayda jaamacadaha. July 15 shahiiday ayaa isha ku haya lacagta qaraabada iyo halyeeyada. Waxay dhahaan 'Waxaan sameyn doonaa Channel Istanbul'. Sida ku xusan qodobka 20aad ee Sharciga Beeraha, beeraleydu waa heli doonaan. Ma ogtahay inta? 177 bilyan oo ginni Way isha ku hayaan lacagta. Magaalada Istanbul waxaa soo foodsaaray halis dhulgariir. Malaayiin dad ah ayaa khatar ku sugan. Haddii aan wax ka qaban doono dhibaatooyinka dalkan, dhibaatooyinka magaaladan, dhibaatooyinka magaaladan qadiimiga ah, markaa dadka ayaan marka hore caawin doonaa. Wuxuu halis ugu jiraa dhulgariir. Aynu sameyno isbadal magaalo. Duqa Magaalada oo Diyaar u ah. Kooxahiisa, cadadihiisa waa diyaar. Degmooyinka degmadu sidoo kale waa diyaar. Ma jiro xisbi xisbi ixtiraamaya. Taasi waa muuqaalka duqa magaaladeena. Marka maxaa diidaya inaan dhibaatadan xallinno. Maxaan mudnaanta koowaad siin weyney nolosha aadanaha? Kama dadaalno mustaqbalka carruurteenna. Maxaynu ugu dhaafnaa halista dhulgariir? ”
Erdogan wuxuu adeegsaday jumlad: 'Haddii aad ka soo horjeedo kanaalka Istanbul, waad qancin doontaa.' Taasi waa jumlad wanaagsan, runtii. Inta aan ka ogahay, Madaxweynahayagu wuxuu casuumay geesi. Waxaan ku dhagaysan doonaa, waad dhageysataa. Malaha saynisyahano ayaa kaa dhaadhicin doona ayuu yidhi. Laakiin isagu ma uusan imaan. Ma garanayo kulamada halkan, laakiin waxaan talo ku leeyahay Mr. Erdogan, waxaan hayaa talo. TÜBİTAK waa mid ka mid ah ururradeenna la ixtiraamo. The Sayniska iyo Golaha Cilmi baarista tignoolojiga of Turkey. Machadkani wuxuu warbixin u leeyahay Wasaaradda Deegaanka iyo Magaalooyinka. Waxaa jira Xarunta Cilmi baarista ee Marmara, oo aan ugu yeerno MAM, oo soo diyaarisay warbixinta. Waxaa lagu xisaabtamayaa sida ay u qaldan yihiin mashruucan 14 qodob. 14 shay. Waxaa jira lix bog, iyo saxiixitaanka lix saynisyahano ah. Ma i rumaysan kartid, ma rumaysan kartid saynisyahano kale. Laakiin adiga ayey kugu xidhan tahay. Waxaan sidoo kale TUBITAK, arday ka mid ah xarun ku taal Turkiga. Waxay weydiiyaan waxa uu ka sheegayo Kanal Istanbul. Wuxuu tirinayaa sida mashruucu khaldan yahay, mid mid, 6 waxyaabood. talo My; Hadaadan heli karin, warbixintaas ayaan kuu soo diri doonaa. Laakiin haddii aad tiraahdid, 'Ma aaminsani marka aad direyso, marka ha u dirin Putin!'
We Waxaan ku guuleysan doonaa Jamhuuriyadda iyo Dimuqraadiyadda oo ay aasaastay Atatürk ”
Ka adkaanshaha Warbixinta EIA dhul ilaa dhul. War miyaadan arkayn warkan aawadiis, Ilaah aawadiis? Miyaadan qiimeyn qoraallada iyo aragtida saynisyahannadan? haddii difaaca Turkey ee maamula iyo in aan inta badan odhan. Haa, Turkey si fiican aan la maamulin, laakiin marnaba ma jiro oo naga mid ah run ahaantii ka quusanina samayn; Marna. Waxaan u soo qaadan doonnaa dhammaan quruxda dalkan. Waxaan dalkeena u soo qaadan doonaa kalgacayl, dulqaad iyo dulqaad. Waxaan ku muteysan doonaa Jamhuuriyadda uu aasaasey Gazi Mustafa Kemal Atatürk iyo asxaabtiisa dimoqraadiyad aad u wanaagsan. ”
Kılıçdaroğlu: Metrobus oo ka yimid Holland ayaan iman kari waayay Istanbul
Kılıçdaroğlu wuxuu furi doonaa saldhigyada idaacada ee İzmir
Kılıçdaroğlu ayaa dhaleeceeyay soo dejinta metrobus
Kılıçdaroğlu: Waxaan keennay tareenka ugu horeeyay
Eeg Tusaaleyaal buuxa Kemal